Maqsuud: Maashaa-Allee Sow Muqdisho Lama Mushaaxaayo!
Gabayga Maqsuud oo ka warramaya isbeddelladii dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho iyo gobollo kale, wuxuu soo baxay 28kii Ogoosto 2006da. Maqsuud, wuxuu daba socdaa gabaygii Murugo oo isna soo baxay saddex bilood ka hor kaasoo qayb ka ahaa warqad furan oo aan u diray shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho 28kii May, 2006da, cinwaankeedu ahaa Inta Tabar La Hayo, Talo Ha La Yeesho .
Sagaashan maalmood ka hor, waxay ahayd xilli muslimiin iyo gaalaba ay dadku la amakaagsanaayeen ficilladii gurracnaa ee dagaal-oogeyaashii laga eryay Muqdisho iyo agagaarkeeda. Dilkii iyo dumintii waxaa ka sii xanuun batay ku digashada iyo ku daacdaacsiga danyartii ay Qabqableyaashu dabargoyntooda doollarka ku soo qaateen.
Maqaraaruf ceebeedka iyo mahadhadaan taagan
Macangagnimo lagu faano iyo maati baan laynay
Muqdishaba qofkii minid maqlaa waa matagayaaye
Waxa dambi makaankeenna yaal Mushrik ka qiirooye
Majuustiina nala yaabtay iyo Mulxidkii gaalaade
Xoolaha macaac lihi gar u leh iney mahmaahaane
Geedaha la maagana maxkamad muddac u aadaane
Haddaan Mowlahey noo naxeyn midi ma joogeene
“Yaa ii muslim ahey” haddey maanta maad noqotay
Oon qabyaalad moodeyno weli iney macaash keento
Quluubtiina ay mirirsantahay waa mashaqo weyne !
Murugo muddo kooban ah, waa wax uu inta badan bani’aadmigu soo maro, laakiin arrinka mashaqada ahi waa in quluubta oo mirirsan weligeed mashaakil iyo musiibo u joog la ahaado, Mowle ayaan ka magan galnaye.
Sida uu Quraankeenna Kariimka ahi noo sheeegay; Alle ma dooriyo qoom aan isagu is doorinnin. Waa in xalka badbaadada laga doono halka ay Rabbi (swt) iyo Rasuulkiisu (scw) noogu tilmaameen iyadoo lala imaanayo dadaal iyo dulqaad badan.
Nabad baa macaan lehe haddaan odayo muuneynin
Haddaan wiilal marrasta u naxaa carriga maansheynin
Maryamiyo haddii aaney kicin Muxibbo qiireysan
Maqrib iyo haddaan mashriq gilgilan meel kastoon joogno
Yaa maali jirayey haddey muranka noo doorin
Oon mici ku dhiigliyo la didin inta mariid halaq leh
Miciinsiga afmiishaar haddaan saaka laga maarmin
Haddaan midigtu bidix muujinnoon talo la maareynin
Shacabkuna dhammaantii mintidin midnimo waa guule
Macbuudkow haddii aan la dhihin magani waa taada
Oon dardaarankii Muxamed(SCW) iyo muuqan taladiisu
Nala muudsayoo marannayoo nala madoobeeye
Waa murugee wahe yaa u maqan magaci Soomaali ?!
Alle Weyne ayaa mahad leh, waxaa maanta isbadalay wax la yaab leh ! Muqdisho oo ahayd meeshii ay ka jirtay musiibadii Soomaaliya ugu ba’neyd ayuu maalmo gudahood ka dhacay isbedel wanaag doon ah oo nacab iyo nasteexba ay wada qireen. Mucjiso!
Inkastoo aan si aad ah uga xumahay in weli dad badan oo Soomaliyeed ay ku dulmayihiin dalkii gudihiisa iyo dunida daafaheeda kala duwan, haddana farxad weyn ayay ii tahay inaan shacabka Soomaaliyeed kala qaybqaato raynraynta ay ku jiraan iyo sida maqsuudka leh ee ay u soo dhoweeyeen isbeddelkii ka dhacay magaalo madaxdii waddanka ee Muqdisho. Dareenkeyga ku aaddan isbedelladii ka dhacay magaalada Muqdisho iyo waliba gobollo kale ayaan jeclahay in aan ku soo koobo gabayga Maqsuud oo soo baxay taariikhda kor ku xusan.
Magacaada Mowlow haddaan maanso ku billaabo
Mu’min kuu cibaadeysta iyo Mulxidka gaaloobay
Majuus iyo Masiixiyo Yuhuud maaro loo waayay
Iyo kii Munaafaqa intuba kaama maarmaane
Inuu Musdafe Nabigaadi yahay aaminkii Muxamed (SCW)
Adiguna Macbuudkeenni tahay waa midaan qiraye
Mulkigaadu weynaa Rabbiyow doqon uun baa mooge.
Midabkoodu waayaha adduun gelinba waa muuqe
Waa murugo mar ay kuu tihiyo maalin faraxeede
Dhaaxaan ayaan maahsanaa sida majnuunkiiye
Dhaaxaan manfacii quudka iyo muufadii nacaye
Dhaaxaan maskaxda shiilayoon mariyay suugaane
Dhaaxaan digniin meela iyo miisay waanadaye
Mas’alooyin dhaaxaan rogrogay mustaqbalkeenna ahe
Maalik weynow dhaaxaan ducada Yaa Mannaan iriye
Muuqaalkii aan filanayoon muddada dhowraayay
Ma la gaaray meeshaan rabiyo waxan maleynaayay?
Ma gilgilatay magaaladii ba’daye nacabku miineeyay?
Inuu shacabku wax maquunin karo maanta ma caddaatay?
Nimankii musiibada ahaa sow ma liqin moolku?
Mowjado rogmada sow ma helin maanyo hirarkeedu?
Nabsigii mijaha sow ma qaban miigna uma taagin?
Sow maro-daf lama eedin iyo mudullo baarbaarad?
Sow lama matagin doollarkii marrasta loo laayay?
Sow ma mirqin mid kireysan iyo macangag yaahuu ah?
Mooryaantii sow lama qabqaban macashu dheeraatay?
Maandooriyiyo sow ma bi’in munkarkii faafaayay?
Meles meeshuu soo muudi jiray sow iskama moosin?
Malqabadda kuwii dafi jiriyo macawis duugowday
Markii jirri marqaan waalay iyo Murux la raacdeeyay
Marinadii ay tuugadu xirtee looga kala maagay
Sow dariiqyadii lama marmaro mirir bir loon oollin?
Sow jidgooyadii lama masixin meherad qaar mooday?
Sidii maalin ciideed dadkoo farxad la muusooday
Maashaa- Allee sow Muqdisho lama mushaaxaayo?
Maangaabkii la hubeynayee mindiyo loo dhiibay
Ee maxastay dabargoynayeen lagu masruufaayay
Waa mahade Mukulaal madow sow macaluulin?
Madaarkii diyaaradaha iyo meeshii laga quustay
Dekeddii maraakiibtu sow maal ka rogi meyso?
Maatidii la dhibay sow Cabdow leyri mari mayso?
Dhagaheennu waxa ay maqlaan sow mashxarad ma aha?
Middii uu Ilaahey na faray meel u wada jeesad
Muwaafaqadu iney guul tahaan dhaar ku marayaaye
Miraheedi waa taa la guran maalmo gudahoode
Mashaa’ikhdiyo sow culimadii la marxabbeyn maayo?
Sow masaajiddii lama cammirin mowlacyadii diinta?
Cadowgii na maagmaagi jiray sow madluun ma aha?
Annaguna Maqsuud sow ma ahin muranku waa ceebe?!
Bulshayahay miskiin baad ahayd marag Ilaaheeye
Mashaqadu markeey kugu dhacdayeed meehannaabaysay
Colaad waa musiibee markey xaajo kaa murugtay
Waa lagugu maadsaday adoo meyd ku hoos yaalle
Mucaawino ifkaan laguma arag madfac la tuura ahe
Mallaariyada waa yaab la yiri Mootarkow roone
Micnihiisa garo Miin dhibco leh waan maldahayaaye ?!
Mabda’ beena iyo maal adduun malafsi aan raagin
Adigoo mashquul ku ah murdinta malas ku hoos taalla
Yaa lagu muraaddeyn lahaa waadse moogtahaye
Dhulkey maqashu kuu daaqdo iyo beerihii mooska
Milkigiisa waxa loo tartamay meeshad huruddaaye
Haddaan maya Ilaahey dhaheen mandaqaddoo iibsan
Marti inaad ku noqon layd adaa ii marqaati ahe !!!
Maantana halkaad gaartayee laga maseyraayo
Muruq laguma keenine Allaan mahadineynaaye
Muluqmuluq iyadoo aan la galin talo ma-dhaafaan ah
Waxba yaan maqaarsaar la shirin maahsaniyo tuuge
Waxba yaan mariid nalagu dhihin waa macaanyahaye
Waxba yaanan marinkii la dedin guusha loo maraye
Rabbi magane aan malabsannee Musxafka taageera.
Mooskiyo Mareykan ma rabaan Yurub ma yeeleyso
Waa mataatac hadalkiisa iyo sheeko maraxeede
Waan madaxbannaannoo maxmiyad ma ahin tooda ahe
Iyaguba waxay maagganyihiin waw muhiim sir ahe
Munaaqishana kama yeelannoo waa mamnuuc abide
Waxba yaan Malyuun deeq ah iyo layna siin maale
Ninba waa middiisee war aan teenna meel marinno
Mu’aamaraddii ay nala rabeen iyo muraadkoodii
Marxabbiyo markii aan ku niri maafiyoy yeelnay
Mujrimiinta kuwii noo xulee mirayay hoygeenna
Midkii naga dhaqaaqaba qolyihii gooyay madixiisa
Marwooyinka kuwii laayayee mudaneyaal dooxay
Miimii qofkii wali u lihi weyska maac yiriye
Muslinnimadu waa xaqe mintida Macmalka yeelkiise.
Masaaliix in la is dhaafsadaa waa mubaax duniye
Ha yeeshee nin qaan kaala maqan oo mag kuu diiddan
Oo wali magliyo soo watoo ku leh mar ii seexo
Miyir ruux leh waa waxanan qaban sidan maleeyaaye
Dad maquuno lagu maalo oo dhaqankii maarreey leh
Maxbuusiin inaannaan ahayn mooro ugu owdan
Haddey nimanku maan leeyihiin saaka yow meersha.
Inkastoon mas’uul nahay isagaa kownkan maamulaye
Qaaddirka haddaan magan galloon maqalno qowlkiisa
Haddaan noqonno Muslimiin dhaboo sunnaha maamuusa
Waa mugdi qabyaalade haddaan meel isaga tuurno
Midnimaa wanaag lehe haddii aan la kala miirmin
Haddii masaska aan didinno iyo mici ku dhiigloo dhan
Hadduu maanku taliyoo la naco muhallig qowsaar ah.
Midkanaa i xiga iyo haddaan mudmudka reer dayno
Haddii kii maslaxaddeena wada aan mudnaan siinno
Haddaan xilku wax nacas muudsadiyo noqonnin maaweelo
Oon sida macaashkii la dhuran hanti malaayiin ah
Caddaaladdu haddey muuqatoo xaakin miisaamo
Muxibbiyo kalgacal inuu imaan waa mid aan hubeye
Inuu muuqan magaceenni dhumay waa midaan hubaye
Ma hubeysnid inaan la is lahayn waa mid aan hubaye
Macaluul in lagu diimayaa waa mid aan hubaye
Iney gurmad masaakiintu heli waa mid aan hubaye
Madaariistu iney badanayaan waa mid aan hubaye
Maatidu iney wada duceyn waa midaan hubaye
In shisheeye laga maarmayaa waa mid aan hubaye
Mowlana inaan hiil ka heli waa mid aan hubaye.
Muslinnimadu waa xaqe mintida Macmalka yeelkiise
--- Dhammaad -----
Diktoor Jaahil : Qiimaha ay aqoontu leedahay waa mid aan la qiyaasi karin oo
Faafin: SomaliTalk.com Sept 7, 2006
Halkan ka akhri qoraal kale oo kusaabsan socdaalkii Nabada Muqdisho